Njalo umshayeli efuna "yensimbi ihhashi" yakhe noma "ingane intandokazi", ngomqondo imoto, sabuka amaphesenti ayikhulu. Akhazimulayo umzimba, amehlo izibani, umkhiqizo ingilazi entsha namasondo - ubuhle, konke ongitshela. Kodwa-ke ngeshwa, ekugcineni amathayi uzokhathala, izibani ikhule turbid, namatshe elincane emgwaqweni ukwenza "abamnyama" into yabo. Kufanele ucabange indlela Phucuzani ingilazi, ngoba umnikazi ezinhle imoto kufanele ngaso sonke isikhathi kuba sengathi ehloniphekayo, futhi bhala ezakho lapha.
Ukuxazulula le nkinga, sicela uxhumane esitolo. Imisebenzi eprofetjhinali kanye nemishini ezinhle ngokuqinisekile kuholele elamukelekile, kodwa kuzobiza ezibizayo. Nge imihuzuko ezincane futhi wiper Ungasingatha bebodwa. Bese kukhona umbuzo yini ukuba ingilazi sula.
Ezweni lethu, yonke into ilula, kanti cishe zonke umthengi imibuzo kakade abakhiqizi yesimanje onginike impendulo yabo ngesimo umkhiqizo osuphelile. Wokucwebezelisa powder angathengwa okukhethekile ezitolo, kanye imishini, ungasebenzisa i sokuprakthiza abavamile, ifakwe umlomo wombhobho ekhethekile. Bulgarian grinder noma Kulokhu, ngeke isebenze, ngoba ungakwazi Phucuzani ingilazi kuphela ngesivinini ngokwanele ongaphakeme (1200-1700).
Umsebenzi wokulungiselela edingekayo. Lokhu wekulihlanta (efanelekayo ezivamile ketshezi ingilazi), kanye saziso unhlangothi iphutha umaka wendawo, lapho uphawu senziwa ngaphakathi. Ungakhohlwa ukufihla umshini uqobo nge ifilimu ovikelayo emaphethelweni emhlabeni itheyiphu somoya glue kuya liquid Splashes musa hit kungaqali lapho. Phela, kuyasiza ukuba banakekele ukuvikelwa yena igalaji izindonga ukungcola ezingadingekile.
Manje ngqo sendlela bathuthukise ingilazi. Powder, cishe 80-150 g, buhlanjululwe ngamanzi ethafeni kuze ukungaguquguquki alube. Uma sokuprakthiza isetshenziswa, it is ivikelwe nge Velcro mandrel ekhethekile, bese isetshenziswa ebusweni the circle wawungathi. Inqubo Kungadingeka napkins futhi ibhodlela lamanzi, ifakwe ukupheka spray. Nasi ingxube lelungiselelwe lisetshenzisiwe umbuthano wawungathi futhi yashaywa phezu ingilazi ngaphandle ukufakwa imishini ezipholisha. Lokhu kulandelwa ngokucophelela, ngaphandle kwengcindezi ngokweqile, engela kancane ukuhambisa iyunithi yokusebenza ngaphakathi endaweni oyifunayo (kangcono uma kuyinto encane -25 x 25cm). Into esemqoka - ayinawo sula ukuze ome, kodwa kubaluleke kakhulu ukuba njalo afafaze ebusweni ngamanzi ingilazi. Ekupheleni endaweni iphathwa is wesula ngendwangu, ukuze siqiniseke ukuthi isici asisekho. inqubo iyaqhubeka, uma kunesidingo.
Okubalulekile !!! Ngaphambi ingilazi emihle, lapho kukhona chipped eside - bayilungise. Kungenjalo, ukususa scuffs amancane, Usengozini yokuthola ufa enkulu.
Kungakhanyi ukukhanya kwezindaba komgwaqo - omunye tintfo letibaluleke kakhulu ukushayela ephephile. elihambisana Khanyisa ekukhazimuleni izibani kubaluleke ngokukhethekile, futhi yellowness, ukungcola kanye nezinye ukukhubazeka iphazamise ukusebenza okuvamile. Kanjani ukuze bathuthukise ingilazi izibani? Cishe ngendlela efanayo isiphephelo somoya. Nge umehluko kuphela ukuthi headlight ngokwayo ngokuzikhethela angasuswa, ngakho njengoba ukungacabangi lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela umzimba. ukwelashwa nazhdachkoy kokuqala Kunconywa umphumela engcono, bese - wokucwebezelisa kwengoma. Abanye abashayeli ikakhulukazi engongi esetshenziswa esikhundleni esikhethekile powder, izinyo unamathisele, futhi bathi weneliseka yi. Nguwena ongazikhethela.